April 16, 2015 March 24, 2019 drkokogyi
This is my Second blog only.
Please kindly read my FIRST BLOG also, as there are more than seven thousand Published (7,074) posts there.
Dr Ko Ko Gyi @ Abdulrahman Zafrudin FIRST BLOG
Pic. Credit Dr. Maung Zarni
April 24, 2019 drkokogyi
အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွား စူရတီများ၏ ကျေးဇူးများ
စူရတီတို့သည် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အစောဆုံး ရောက်လာကြသည့် အိန္ဒိယသားများ ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စူရတီတို့ကို လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် သိထားသော်လည်း သူတို့သည် သီးခြားလူမျိုးတစ်မျိုး မဟုတ်ပေ။ သူတို့ သည် အီန္ဒိယနိုင်ငံ ဂူဂျရသ်ပြည်နယ်ရှိ စူရသ်မြို့သားမျာကို ခေါ်သော အခေါ်ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ် မြန်မာပထမစစ်ပွဲ မဖြစ်မှီ ၁၈၂၀ ခုနှစ်တွင် ဂူဂျရသ်ပြည်နယ် ရန်ဒေးမြို့မှ မူလာဟာရှင်၊ မူလာကာစင်၊ မူလာအီဗရာဟင်နှင့် မူလာမာမက် အမည်ရှိ ညီနောင်လေးဦးသည် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။
April 24, 2019 April 24, 2019 drkokogyi
သမိုင်းဖျောက်ခဲ့သူများကြောင့် တချို့ သမိုင်းမသိသူများ၊ များလာတဲ့အတွက် သိစေနိုင်ရန် ရေးသားလိုက်မိပြန်တယ်…….
April 22, 2019 drkokogyi
I haven’t seen or known him outside but looking at these pictures IF we check his genetics, he could havealot of Chinese blood!
နိုဗိုတယ် ဟော်တယ် ပိုင်ရှင်ကဘယ်သူလဲသိချင်ယင်ဖတ်ကြည့်…..
Credit : မင်းဒင်
အမေ့ခံ ကချင် စစ်သူရဲကောင်းများ (အပိုင်း ၁) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် လေ့လာဆည်းပူးမိသလောက် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းအမှား၊ မပြည့်စုံမူတွေရှိခဲ့ရင် (မဆဲဆိုပဲ)သဘောထားကြီးစွာ ထောက်ပြပြုပြင်ပေးပါခင်ဗျာ။
Malap mali hkrum nga ai Share Ninghkring ni (Daw 1) hpe tang madun dat nngai.Ngai sawk sagawn hkaja lu ai daram tang madun ai sha re. Shut shai, n hkum zup ai lam nga yang, tsawra myit hte madi madun sharai la ya rit.
(Like မလိုချင်ပါ။ များများသာ share ပေးကြပါ။ သမိုင်းဆိုတာ လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်။)
ဦးသိန်းစိန် လက်ထက်က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြည်သူတွေက ကန့်ကွက်ကြလို့ ရပ်ပေးလိုက်ရတာရယ်
တရုတ် ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်သံ တွေထွက်လာတာရယ်ကြောင့်
အာရုံလွှဲတဲ့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာပြသနာနဲ့
ပိုက်လိုင်းဖြတ်သန်းရာ လမ်းတလျှောက် ဘာသာရေး လူမျိုးရေးပြသနာတွေဖော်ပြီး
မွတ်စလင် နှိပ်ကွပ်ရေး အလုပ်တွေ ရှုပ်နေစေအောင် ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်
BlueShirt4Burma နေ့မှာ မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်များအကြောင်း Fortify Right ဖော်ပြ
ကို ထွန်း အေး
ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၈ Myanmar Muslim Media
အခြေခံအကြောင်းမရှိပဲ မြန်မာမွတ်စလင်ဒါဇင်နဲ့ချီတရားလွတ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့မှုကို Fortify Rights အဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ သြဂုတ်လ ၄ရက်နေ့မှာ မြန်မာစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးက ရှမ်းပြည်နယ် ကွမ်ဟိန်းကမင်္ဂလာပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့တောင်ကြီးကထွက်ခွာလာတဲ့မြန်မာမွတ်စလင်၁၄ယောက်ကို တရားလွတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတို့သား သတို့သမီးတင်မကပဲ သတို့သားမိဘတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပွဲစီစဉ်မှုကိုကူညီပေးဖို့ငှားထားသူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာမှာ မြန်မာအစိုးရက အရေးပေါ်အက်ဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပေမယ့်လည်း မင်္ဂလာပွဲသွားရောက်တဲ့ ၁၉ယောက်ဟာဒီကနေ့ထိဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံတွေဟာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မင်္ဂလာပွဲတက်ရောက်ဖို့လာတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရမှုကိုသိမြင်ပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။
We hereby request to force the USDP Generals who took the money and profit from Myitsone project to pay back the compensation for cancelling the project
Image April 22, 2019 drkokogyi